China ahaziri Water Doodle Kedo akwa ute Manufacturers, Suppliers, Factory - kwuru - Seeslar Printing equitment
.Lọ > Ngwaahịa > Aqua Ime Anwansi Doodle ute > Water Doodle Kedo akwa ute
WaterDoodle Kedo akwa ute
Xinle Printing Equipment Co., Ltd. bụ ọkachamara na-emepụta mmiri graffiti mats, ma nyere ọtụtụ ndị ahịa n'ụlọ na mba ofesi hazie ma mepụta akwaaji mmiri. Dabere na ezi mma na ezi ọrụ, ndị mmekọ na-eto ya nke ukwuu. Anyị ụlọ ọrụ nwere 5 nnukwu-ọnụ ọgụgụ ígwè obibi akwụkwọ, 3 laser igwe, 5 15 mita-ogologo ihicha ọwa, 9 ọkachamara oru injinia, na ihe karịrị 60 ọrụ. Mmepụta mmepụta dị elu, a na-emesi obi ike ma nwee ntụkwasị obi.
1. Product iwebata nkeWater Doodle Kedo akwa ute
2. Ngwaahịa ngwaahịa (nkọwa) nkeWater Doodle Kedo akwa ute
730mmX1000mm nwere ike ahaziri size
3. Product atụmatụ nkeWater Doodle Kedo akwa ute
4. Olee otú iji nkeWater Doodle Kedo akwa ute
Xinle Printing Equipment ka ahaziri mmiri graffiti ute maka imerime ndị ahịa, na ọtụtụ nke kacha mma-ere mmiri kwaaji na ahịa na-emepụta anyị. Anyị nwere ike ịmịpụta dịka mkpa ndị ahịa si dị, dịka usoro enyere, ogo na ihe ndị ọzọ chọrọ. Ọrụ nkwụsị, adaba ma dị mfe.
Gwa ---- chọpụta ụkpụrụ ---- chọpụta nha ---- chọpụta ihe achọrọ - nyocha ---- nata nnwale nnwale - usoro ---- mmepụta
6. Iru eru nke ngwaahịaWater Doodle Kedo akwa ute
7. Ngwaahịa nnyefe nkeWater Doodle Kedo akwa ute
Azịza: Anyị bụ ndị a ọkachamara emeputa nke mmiri graffiti ute. Nwere ike ịhụ foto nke ụlọ ọrụ anyị.
Tags na-ekpo ọkụ: Mmiri Doodle Kedo akwa ute, China, ndị na-emepụta, ndị na-ebubata ya, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ahaziri, ọnụahịa, nkwupụta, na ngwaahịa